Erdogan oo sheegay in Turkigu berri qalab caafimaad u dirayo Mareykanka si uu uga caawiyo la dagaallanka Coronavirus
Mogadishu - 01:47:06
Monday April 27, 2020 - 22:08:06 in Wararka by Super Admin
Madaxweynaha waddanka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay in berri oo Talaado ah uu dalkiisu Maeykanka u diri doono gurmad caafimaad oo isugu jira dhammaan waxyaabaha looga gaashaanto Coronavirus iyo Maasgarad wejiga lagu xirto.
"Waxaa la marayaa xilli dalalka horumaray ay Turkiga weydiisanayaan caawimaad, waxaan u fidinay taakuleyn dalal kala duwan laga billaabo Balkans illaa Afrika" ayuu yiri Erdogan.
"Waxaan berri oo Talaado ah ah gargaar caafimaad u direynaa Mareykanka, taasoo ka kooban maasgarada qalliinka, N95 masks, dharka qafilan ee la isaga difaaco cudurrada faafa iyo dawooyinka bakteeriyada dila" ayuu sii raaciyay madaxweyne Erdogan oo sheegay in xamuulkan ay qaadi doonto diyaaradda militeriga Turkiga.
Wuxuu kaloo xusay Erdogan in 31 magaallo oo Turkiga ah lagu soo rogay saddex maalmood oo bandoow, sidoo kale bandoowga maalmaha fasaxa (weekend) ayaa isna sii socon doona illaa wixii ka dambeeya Ciidul Fidriga dhammaadka May.
Xilliga xaaladdu caadi ku soo noqon doonto ayuu sheegay Madaxweyne Erdogan inay dib ka soo sheegi doonaan.
Xaaladaha Coronavirus ee Turkiga ayaa kor u dhaafay 100,000 oo ruux, halka dhimashaduna ay mareyso 2,900.